यौ न तालिकाः कसरी दोब्बर आनन्द लिन सकिन्छ ? « गोर्खा आवाज
यौ न तालिकाः कसरी दोब्बर आनन्द लिन सकिन्छ ?
कुरा अनौठो र भड्किलो लाग्न सक्छ । किनभने हामीकहाँ यौ नको कुरा गर्नसाथ हामी लाजले खुम्चन्छौं । हामीलाई लाग्छ, यौ न भनेको छाडा कुरा हुन् । यही भ्रमित मानसिकताले हामी यौ नको बारेमा खुला चर्चा गर्दैनौ, यौ नको उन्मुक्त आनन्द लिदैनौं । अध्ययनहरुले भन्छ, यौ न सुख नै दाम्पत्य सफलताको प्रभावकारी सूत्र हो । तर, हाम्रो यौ न जीवन त्यती सुखमय छैन, जति हुनुपर्ने थियो । त्यही कारण हाम्रो दाम्पत्य कसिलो र रसिलो हुन नसकेको ।
खासमा दम्पतीले यौ न सुख कसरी लिने भन्ने कुरामा नयाँ नयाँ अभ्यास गर्न सक्छन् । यसले उनीहरुको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुन्छ । किनभने यौ नले मानसिक र शारीरिक रुपमा चुस्त बनाउन सहयोग गर्छ । अब चर्चा गरौ, यौ न तालिकाको । के यौ न का लागि पनि तालिका आवश्यक हुन्छ ? यौ न तालिका तय गरियो भने त्यसले दाम्पत्यमा रोमाञ्चकता थपिदिन्छ । त्यतीमात्र होइन, यौ न जीवनलाई थप आनन्दित तुल्याउँछ ।
यौ न बारे तयारी र सोंच – यौ न तालिकाको यो सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो । अन्यथा अस्तव्यस्त जीवनशैली र तनावपूर्ण माहोलका बीच दिमागमा यौ न को कुरा नै नआउन सक्छ । यौ न को समय निश्चित भएपछि सबै कुरालाई थाती राखेर आफ्नो प्रियतमसँग राससिला गर्न सकिन्छ ।
ओछ्यानमा नयाँ प्रयोगको इच्छा – जब थाहा हुन्छ कि आज राति यति बजे यौ न क्रिया गर्ने कार्यक्रम छ, दिनभरी रोमाञ्चित भइन्छ । दिमागमा विभिन्न योजनाहरु बन्न सक्छन् ।नयाँ नयाँ प्रयोग गर्नेबारे सोच्न सकिन्छ । फलस्वरुप राति मज्जा दोब्बर हुन्छ ।
सुमधुर समय बित्छ – इन्टरनेट र प्रविधिले हाम्रो जिन्दगीको अमनचैन नै खोसेको छ । प्रेमको दुई शब्द व्यक्त गर्न श्रीमान-श्रमितीबीच समय नै हुँदैन । यस्तोमा यदि तालिकामा बाँधियो भने एक अर्काको अंगालोमा सुमधुर समय बिताउन सकिनेछ । यसले दाम्पत्य जीवनमा अझै प्रगाढता थप्नेछ ।
तयारीका लागि समय मिल्छ – जब यौ न का लागि मानसिक रुपमा पहिल्यैबाट तयार भइन्छ, यसका लागि तयारी गर्न पर्याप्त समय मिल्छ । आफ्नो फेन्टासीलाई यथार्थमा बदल्न सम्पूर्ण प्रयास लगाउन सकिन्छ ।
अस्विकारको गुञ्जायस हुँदैन – दुई जनामध्ये एक जना यौ न का लागि आतुर हुने तर अर्कोलाई जोश नआउने समस्या पनि अक्सर हुन्छ । तर, दुवैको सहमतिमा तालिका तयार गरिसकेपछि दुवै जना मानसिक रुपमा तयार हुन्छन् । त्यसैले रातमा कुनै पनि पक्षबाट इन्कार गर्ने सम्भावना रहँदैन ।